Barea de Madagascar: misaotra ireo mpilalao ny Alefa Barea | NewsMada
Barea de Madagascar: misaotra ireo mpilalao ny Alefa Barea
Manoloana ny fivoarana lehibe sy ny ezaka vitan’ny Barea de Madagascar ka nahatafitan’i Madagasikara hiatrika ny “Can 2019”, nitondra fisaorana sy fankasitrahana ho an’ireo mpilalao rehetra sy ny mpanazatra ary ireo ekipa teknika ny fikambanana Alefa Barea. Nomarihin’ity fikambanana ity fa efa tsy nanantena intsony ny mbola hisandratan’ny baolina kitra malagasy ireo mpitia.
Nambaran’ireo mpilalao anefa fa anisan’ny nampisy risi-po sy nankahery azy ireo ny fijoroan’ireo mpanohana isan-tokony. Anisan’izany ny fikambanana Alefa Barea, nanome tanana hatrany ary nino sy nijoro hatramin’ny voalohany ka hatramin’ny farany ho azy ireo. Nankahery, na tany ivelany aza no nilalao ny Barea. Nanotrona ihany koa teto an-tanindrazana ary tonga maro nitsena ireo mahery fo tamin’ny fahatongavany teto Madagasikara. Nanampy nitady vahaolana, raha nisy ny olana, nikarakara araka izay azo natao, nahafahan’ireo mpilalao nanakaiky ny mpitia baolina kitra.
Niteraka fahasahiana sy namelona indray ny fitiavana sy ny herim-pon’ireo mpilalao sy ny mpijery izany ezaka rehetra nataon’ny Alefa Barea izany ka nahazoana izao vokatra, iarahan’ny Malagasy rehetra mifaly, izao. “Mbola mijoro hatrany, hanohy ny fanohanana ny Barea ny fikambanana Alefa Barea”, hoy Ramisamanana Lova, filohan’ny Alefa Barea.